/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Acetic Acid ntụ ntụ
SKU: 459789-99-2. Category: R & D mmeghachi omume
Molekụla Formula: C26H44O4
Ọbara arọ: 420.63
Ọ bụ ezie na a na-eji ọgwụ a agwọ ọrịa biliary cholangitis (PBC), ọ pụkwara ịkpata mmebi nke ụfọdụ mgbaàmà imeju. Gwa onye dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà dịka ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ na-akawanye njọ akpụkpọ anụ, ọgbụgbọ / vomiting nke na-adịghị akwụsị, ụfụ agụụ, afo / abdominal pain, yellowing eyes / skin, urine urine, nkwonkwo nkwonkwo na nkwonkwo ụkwụ / ụkwụ / afọ, ma ọ bụ mgbanwe uche / ọnọdụ. Dọkịta gị nwere ike ịkọ ọgwụ ndị ọzọ dịka resin mmiri dị na bile acid ma ọ bụ ọgwụ antihistamines, ma ọ bụ kwụsịtụ nwa oge iji gbanwee ọgwụ gị iji nye aka ịchịkwa mmetụta ụfọdụ. Soro dọkịta gị kwurịta ihe ize ndụ na uru nke ịṅụ ọgwụ a.
Acetic Smoke Powder Recipes